လိုချင်ရင် ရအောင်ချူလော့၊ သင်၏အခွင့်အရေး သင်လက်မနှေးစေလို ~ Nge Naing
လိုချင်ရင် ရအောင်ချူလော့၊ သင်၏အခွင့်အရေး သင်လက်မနှေးစေလို
Saturday, December 10, 2011 Nge Naing 58 comments
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း၊ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ကို မသဒ္ဒါက လိုရင်းတိုရှင်း လွယ်လွယ်နားလည်အောင် ထိထိမိမိ အတိုချုပ်လုပ်ထားတာကို သဘောကျလို့ ပြန်လည်ကူးယူ ဒီနေရာမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တာကို မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အသစ် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ မသဒ္ဒါရဲ့ မူရင်းကဗျာကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Nge Naing -(10/12/11)
Posted in: ကဗျာ,အထွေထွေ,နိုးဆော်လွှာ
C P ကြက် သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ခြင်းကို မနှစ်မြို့သူ says:
(ကဗျာစာဆို - ဆရာနေရဲနီ)
C P အကောင် ၅၀ လောက်ကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားတယ်။
ပျံသန်းခြင်းသင်္ခန်းစာကို ဘယ်သောအခါမှ မသင်ကြားခဲ့ရလေတော့
December 10, 2011 at 5:48 PM Reply
ကြက်မှာလည်း C P ကြက် ရှိသလို
လူမှာလည်း C P လူ ရှိတယ်။
လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်လို ဟာမှန်း မသိတဲ့
ညွှန်ချုပ်ရာထူးနဲ့ C P လူ တစ်ယောက်က
ခနဲ့သလို ရွဲ့သလို လှောင်သလို ပြောင်သလို
အမည်ဖေါ်ပြလို့ မရတဲ့ သုတေသန တစ်ခုအတွက်
မိတ္တူရှိရင်တောင် ထိုက်တန်တဲ့ဆု ချီးမြှင့်ပါ့မယ်အကြောင်း
မီးဟုန်းဟုန်း တောက်တော့မည့် မြန်မာပြည် တဲ့။
လွတ်မြောက်ခြင်းကို အလိုမရှိတဲ့ C P ကြက် လို လူတွေကို သတိထားဘို့အတွက်
December 10, 2011 at 5:50 PM Reply
ပြည်တွင်းမှ ကဗျာရှင် ဆရာနေရဲနီ၏ ပြောင်မြောက်လှသော ကဗျာများကို မဖတ်ရသေးသော ပရိသတ်များအနေနှင့် ဖတ်လိုလျှင် နေရဲနီကဗျာများ ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ် လုပ်၍ ဒီမိုဝေယံဘလော့တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
CP ကြက်နဲ့ ဥစားကြက် အကြောင်း says:
December 10, 2011 at 5:52 PM Reply
CP ကြက်နဲ့ ဥစားကြက် အကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်ရှုလိုလျှင် "CP ကြက်နဲ့ ဥစားကြက် အကြောင်း" ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ် လုပ်၍ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
လွတ်လပ်ခြင်းကို မလိုချင်တော့တဲ့ "C P ကြက်" လို လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အကူးစက် မခံရအောင် သတိထားကြပါ says:
ဆရာနေရဲနီ ရေးစပ်ထားတဲ့ (( C P ကြက် သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ခြင်းကို မနှစ်မြို့သူ )) ကဗျာစာသားတွေက ပြောင်မြောက်လိုက်တာ..
(( C P ကြက် သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ခြင်းကို မနှစ်မြို့သူ )) ကဗျာခေါင်းစဉ်ကလဲ အပိုအလို မရှိ ကွက်တိပဲ..
အခုတလော အမိမြန်မာပြည်ကြီးမှာ "C P လူ" တွေ များသထက် များလာနေတယ်..
"C P လူ" တွေက "C P ကြက်" တွေလိုပဲ လွတ်လပ်ခြင်းကို မလိုချင်ကြတော့ဘူး..
(( ထားရာနေ၊ ကျွေးတာစား၊ ပေးတာယူ၊ ပြန်မပြောဝံ့တဲ့ ဗျူရိုကရက်လောကသား )) ဘဝနဲ့ အသားကျနေပြီ..
"C P လူ" တွေက ဆရာနေရဲနီ ရေးစပ်ထားတဲ့အတိုင်းကို အတိအကျ ဖြစ်နေတာ..
(( ထားရာနေ ကျွေးတာစား အသတ်ခံ ရမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေရတဲ့ဘ၀မှာ
ရန်သူအဖြစ် ထိုးဆိတ်ခြင်းကို ခံကြရတယ်။ ))
..... ဆိုတဲ့ ဆရာနေရဲနီ ရဲ့ ကဗျာစာသားတွေက စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်မှန်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေသလိုပဲ..
အဲဒီလို လွတ်လပ်ခြင်းအတွက် ရုန်းထွက်ဘို့ ကြိုးစားမယ့် ကြက်ကို ရန်သူအဖြစ် ထိုးဆိတ်တတ်တဲ့ "C P ကြက်" တွေရဲ့ အပြုအမူကို ပုံတူ ကူးယူနေကြတဲ့ "C P လူ" တွေက ဒီလပိုင်းတွေမှာ သိသိသာသာ တိုးပွားလာနေတယ်..
စစ်အာဏာရှင်စနစ် လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆင့်အတန်း တိုးတက်မှု၊ ပညာရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်မှု၊ လမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး အပြည့်အဝ လိုချင်တဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကို မလိုချင်တော့တဲ့ အဲဒီ (( ထားရာနေ၊ ကျွေးတာစား၊ ပေးတာယူ၊ ပြန်မပြောဝံ့တဲ့ ဗျူရိုကရက်လောကသား )) ဘဝနဲ့ ပုံစံခွက်ထဲကအတိုင်း ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ "C P လူ" တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အကူးစက် မခံရအောင် သတိထားကြဖို့ ဆရာနေရဲနီက သတိပေးတာ အင်မတန် လျော်ကန်ပါတယ်....
အစားအသောက်မှာသာ ယစ်မူးနေကြတဲ့ C P ကြက်တွေအတွက် ငှက်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာမှန်း မသိခဲ့သလို
ရာထူးစီးစိမ်မှာ ယစ်မူးနေတဲ့ C P လူတွေအတွက် လွပ်လပ်ခြင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာလည်း ဘာမှန်း မသိခဲ့ကြဘူး။
၁၉၈၈ တွင် ရေးသားခဲ့သည့် “မီးဟုန်းဟုန်း တောက်တော့မည့် မြန်မာပြည်” လက်ကမ်းစာစောင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အလိုရှိနေ says:
၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာလများ၌ ဆရာဝန်တစ်ဦး ကလောင်အမည်ခံကာ ရေးသားဝေငှခဲ့သည့် “မီးဟုန်းဟုန်း တောက်တော့မည့် မြန်မာပြည်” လက်ကမ်းစာစောင်ကို ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းအဖြစ် ထားရှိရန် အလိုရှိနေပြီး ပေးပို့သူကို ထိုက်သင့်သည့် စာမူခ ချီးမြှင့်မည်ဟု ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၁ ဖြင့် တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကြော်ငြာစာကို ၂၀၁၁၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဆက်သွယ်ရမည့် ညွှန်ကြားရေးမှူး အဆင့်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးထားသည်။
ယင်းကြေညာချက်ထဲတွင် ရုံးအနေဖြင့် မှတ်တမ်းအဖြစ် လိုအပ်လျက် ရှိသည်ဟုသာ ဖော်ပြပါရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦးက “ရေးတဲ့သူကို ဥပဒေအရ အရေးယူဖို့လား၊ ဘာလား၊ ဆိုတာကို ပြောလို့ ရနိုင်တာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ နောက်ပြီး အချိန်ကာလကလည်း ၂၂ နှစ်ကျော်တောင် ကြာပြီဆိုတော့ ဘယ်လို အကြောင်းရှိနိုင်မယ် ဆိုတာကို ခန့်မှန်းဖို့ သိပ်ခက်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
၁၉၈၈ အရေးအခင်းတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ဒုတိယနှစ် ရူပဗေဒ အထူးပြု ဘာသာဖြင့် ပညာသင်ကြားခဲ့သူ ဦးဖြိုးမင်းသ်ိမ်းက “အဲဒီအချိန်ကို အခုအချိန်ထိ မှတ်မိနေတုန်းပဲ။ ခက်တာက လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေတာတွေက အများကြီးပဲ ရှိနေတာကိုး။ အဲဒါကိုမှ ခေါင်းစဉ်ကြီးပဲ ပြောလို့ကတော့ မမှတ်မိနိုင်ဘူး။ အထဲက အကြောင်းအရာ တချို့ကို သိရရင် ပြောနိုင်မယ်” ဟု ဆိုသည်။
၈၈ ကို သိမီလိုက်ကြသူ အချို့အား ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ အချို့က အဆိုပါ စာစောင်ကို မရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အချို့ကမူ စာရွက်အားလုံး မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့၍ သေချာ မမှတ်မိတော့ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်မှ အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်ရှိ လုပ်သားကြီး တစ်ဦးက “အရေးအခင်း ပြီးတော့ ဘယ်သူက လှုံ့ဆော်စာတွေကို လက်ထဲ ကိုင်ထားရဲမှာလဲ။ ဖျက်ဆီးပစ်မှာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
၈၈ အရေးအခင်း အပြီး ပြည်ပသို့ သွားခဲ့သူ အချို့နှင့် ထိုဖြစ်ရပ်ကို အမှတ်တရ အနေဖြင့် ထားရှိရန် လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်း ထားနိုင်သူ အချို့ထံတွင် အဆိုပါ လက်ကမ်းစာစောင် ရှိနေနိုင်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုပေးသည်။
မီးဟုန်းဟုန်း တောက်တော့မည့် မြန်မာပြည် says:
December 11, 2011 at 3:35 PM Reply
December 13, 2011 at 2:52 PM Reply
December 13, 2011 at 2:56 PM Reply
အခုတလော ဒေါ်စုကို မဆီမဆိုင်၊ လက်ပံသား ဓားနဲ့ချိုင်ပြီး အတိုက်ခိုက်ဆုံး နိုင်ငံရေးဘလော့ ပို့စ် တွေထဲမှာ ဒီ ပို့စ် က လက်ပံသား ဓားနဲ့ အချိုင်ဆုံးပဲ says:
December 13, 2011 at 3:02 PM Reply
ဘယ်လို မဆီမဆိုင်၊ လက်ပံသား ဓားနဲ့ချိုင်ပြီး ဒေါ်စုကို တိုက်ခိုက်ထားသလဲ ဆိုတာကို ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်..
Myanmar Express ဘလော့ဂ်က စစ်ကျွန် ဒေါ်လာစား က ပြည်သူ့ဘက်သား မငယ်နိုင် ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ကတဲက အခုထိ နှောင့်ယှက်လာတာပါ says:
December 13, 2011 at 3:12 PM Reply
Myanmar Express ဘလော့ကို အောင်သောင်းသားတွေ (နေအောင်၊ မိုးအောင်) က ဖွဲ့ စည်းပြီး စစ်အစိုးရအာဘော်တွေကို ဆက်တိုက် ဖြန့်ချီလာတယ် says:
အောင်သောင်း ရဲ့ သားများဖြစ်တဲ့ နေအောင်၊ မိုးအောင်တို့ဦးစီးပြီး မြန်မာ အိပ်စ်ပက်ရက်စ် ဒေါ့နက် http://www.myanmarexpress.net/ ဆိုတာကို ဖွဲ့ စည်းပြီး စစ်အစိုးရအာဘော်တွေကို ဆက်တိုက် ဖြန့်ချီလာတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
ယခင်က ထောက်လှမ်းရေးညွန်ကြားရေးမှုး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး မြက်ခင်းသစ် မဂ္ဂဇင်း ဆိုတာကို ပုံမှန်ထုတ်ဝေပြီး ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို အပုပ်ချ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့ မမှန်သတင်းတွေကိုလည်း ပုံမှန် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
Myanmar Express ဟာ မကြာသေးခင်က "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေပါ" ဆိုပြီး ပေါက်ပန်းသေး မေးခွန်း ၅၀ ခန့် ကို ရေးသား တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
Myanmar Express ဟာ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး သတင်းတွေကိုလည်း မသိမသာ ဆက်လက် တင်ပြနေတယ်။
အိမ်နီးချင်း အာရှနိုင်ငံတွေမှာ လည်ပတ်နေတာ ကြာလှပြီ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှာလည်း တည်ဆောက်သင့်တာ ကြာလှပြီ ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ မြေအောက်မီရထားလမ်း ပရောဂျက် ကိုလည်း လူပိန်းကြိုက် ၀ါဒဖြန့် ချီတဲ့ အနေနဲ့ Myanmar Express မှာ တင်ထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
ယခုအခါ မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိုဇော်ဝင်း (နယူးယောက်) နှင့် ထက်ရာဇာတို့ ကို ဦးတည်ပြီး တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ ရပါတယ်။
အောင်သောင်း သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုးအောင်၊ နေအောင် (ဆိုးပေနဲ့ မောင်မဲ ) တို့ ဟာ တေဇ ထက် ချမ်းသာနေတယ်လို့ သတင်းရပြီး မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ်လေးများကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အမျိုးကောင်းသမီးတို့ ရဲ့ဓါတ်ပုံများကို ခိုးယူပြီး အင်တာနက်ဆိုက်များမှာ ဖြန့် ချီခြင်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြတယ်။
(ကိုမိုးသီးဇွန် ဘလော့မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။)
December 14, 2011 at 2:35 PM Reply
Myanmar Express ၀က်ဆိုက်ပိုင်ရှင်၏ သွေးရူးသွေးတန်း အရူးချီးပန်း စွပ်စွဲချက်အမှားများကို ထက်ရာဇာ ၏ တုန့် ပြန်ချက် (အပိုင်း ၃) says:
<<< (အပိုင်း ၂) မှ အဆက်
ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီဖက်တော်သားတွေကို ဘယ်လောက်အထိ ချက်တင် မှာရော၊ နည်းပညာအရရော အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီသတင်းဝက်ဆိုက်ဒ်တွေကို အောက်လမ်းနည်းနဲ့ သုံးပြီး ဒုက္ခပေးနေတယ် ဆိုတာလဲ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ ကျနော် ဒီလောက်ပဲ ရေးချင်ပါတယ်။
Myanmar Express က စိုင်းအောင်ထိုက်စံ က သူ့မယားငယ်လေး ချက်တင်မှာ လင်ငယ်တွေ အများကြီးနေတိုင်း သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ အရူးချီးပန်း လျောက်ရေးနေတဲ့စာကို သူငယ်ချင်းတွေက ပြန်ရေးခိုင်းလို့ ရေးရတဲ့အတွက် ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်တောင် ရှက်ပါတယ်။
အသေးစိပ် သိချင်ရင် ကွန်မန့်များ ထားခဲ့ပါ။ Myanmar Express က စိုင်းအောင်ထိုက်စံ အကြောင်း ရေးလက်စနဲ့ ဒီထက် တိကျတဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းများကို ထပ်ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါ။
Myanmar Express ၀က်ဆိုက်ပိုင်ရှင်၏ သွေးရူးသွေးတန်း အရူးချီးပန်း စွပ်စွဲချက်အမှားများကို ထက်ရာဇာ ၏ တုန့် ပြန်ချက် (အပိုင်း ၄) says:
December 14, 2011 at 4:06 PM Reply
<<< (အပိုင်း ၃) မှ အဆက်
၃။ ကျနော် အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် နဲ့ ဘယ်လိုမှ ပါတ်သက်ထားခြင်း၊ ပါတ်သက်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်အရ ခင်မင်မှုများသာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်က အေဘီ နာမည်ခံပြီး နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ယူတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်က တော်တော် ဟာသမြောက်တဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါ။
စင်ကာပူရောက် မြန်မာများထံသို့ Forward လုပ်ပေးကြပါ says:
စင်ကာပူရောက် မြန်မာများထံသို့ Forward လုပ်ပေးကြပါ
For Myanmar in Singpore
စင်ကာပူ.. Penisula Plaza3floor က "Shwe Yadanar ရောင်းဝယ်ရေး" မှ တဆင့် ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲသူများ ရန်ကုန်သို့ ငွေမရောက်သေးသောကြောင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းသူများကို "မရှိဘူး.. မသိဘူး" ဟုသာ ပြောနေပါသည်...
စင်ကာပူ.. ပင်နီဆူလာပလာဇာက "ရွှေရတနာ" ဆိုင် ရဲ့ ပိုင်ရှင် ကိုစိန်ဝင်းရဲ့ မိန်းမ မတင်တင်မြင့် (ယခု အင်္ဂလန်တွင် ရောက်နေသူ) က ဟွန်ဒီ လွှဲငွေ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ လိမ်လည်သွားပါပြီ..
ယနေ့ တွင် SG မှ SHWE YADANAR ရောင်းဝယ်ရေး ၏ ဟွန်ဒီ ငွေလိမ်မှုကို မသိသေးသော ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲသူများ၏ ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲမှုကို "ရွှေရတနာ" ဆိုင် ရဲ့ ပိုင်ရှင် ကိုစိန်ဝင်းက ဆက်လက် လက်ခံနေပါသည်...
နီးရာ မိတ်ဆွေများထံသို့ Forward လုပ်ပေးကြပါ...
By: Ko Phyo
စင်ကာပူ၊ ပင်နီဆူလာပလာဇာက ဟွန်ဒီ လွှဲငွေ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ လိမ်လည်မှု says:
December 22, 2011 at 8:48 PM Reply
စင်ကာပူ၊ ပင်နီဆူလာပလာဇာက ယူအက်စ်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ လိမ်လည်မှု ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ ခင်ညာ။
ပင်နီဆူလာ နှစ်ထပ်မှာရှိတဲ့ "ရွှေရတနာ" ဆိုင် ရဲ့ ပိုင်ရှင် လင်မယားဖြစ်တဲ့ ကိုစိန်ဝင်း၊ မတင်တင်မြင့်တို့ဟာ ငွေအရောင်းအဝယ်လောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကထဲက ဆရာကြီးတွေပါ။ ပင်နီဆူလာပလာဇာ၊ ပြီးတော့ လပ်ကီးပလာဇာ၊ နောက်ဆုံးတော့ ဘူမိနက်သန် အမှန်ဖြစ်တဲ့ ပင်နီဆူလာပလာဇာကို ပြန်ရောက်ပြီး "ရွှေရတနာ" ဆိုင် ရယ်လို့ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ငွေအရောင်းအဝယ်ကို သန်းနဲ့ချီပြီး လုပ်တာပါ။ သူတို့နဲ့အပြိုင်ကတော့ သုံးလွှာက "တော်ဝင်" ပါ။ အပြိုင်အဆိုင် မိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ ငွေဈေး တက်ကုန်တာလဲ သူတို့ကျေးဇူး မကင်းပါဘူး။
ပင်နီဆူလာလောကမှာတော့ သူတို့တွေကို Big Hand ("လက်ကြီးသမားတွေ") လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ငွေလွှဲဆိုင်များရဲ့ အဓိကဝင်ငွေကတော့ မြန်မာပြည်ကို ငွေပြန်လွှဲတဲ့လူတွေဆီက ရတဲ့ စင်ကာပူ / ယူအက်စ် (သူတို့အခေါ် "ကောက်ဈေး") ကို ပြန် အရောင်းအဝယ် လုပ်ရာကနေ ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်နဲ့ ရပ်တည်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ငွေသွားလွှဲရင် ကောက်ဈေးက ၆၀၀ ဆိုပေမဲ့ ပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ ၆၁၀ / ၆၁၅ နဲ့ ပြန်ရောင်းပါတယ်။ ဆိုင်အချင်းချင်းလဲ တစ်ဒေါ်လာကို ငါးမူးစား၊ တစ်ကျပ်စားနဲ့ လက်လှည့် ရောင်းပါတယ်။
မတင်တင်မြင့်က စင်ကာပူမှာ ဆိုင်ကို ကြီးကြပ်နေရာကနေ သမီးဖြစ်သူ ပညာသင်နေတဲ့ အင်္ဂလန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်မှာ အလည်ရောက်သွားပြီး ဟိုကနေ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို ဆက်ပြီး လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကိုစိန်ဝင်းကတော့ စင်ကာပူမှာပဲ နေခဲ့ပါတယ်။ ငွေအပေးအယူ အားလုံး အဆင်ပြေနေရာက ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ညမှာ ပြဿနာ စဖြစ်တာပါ။ သူ့နဲ့ အရောင်းအဝယ် လုပ်ထားတဲ့ လူတွေက ဘဏ်အကောင့်ကို စစ်တော့ ပုံမှန် ဝင်ရမဲ့ငွေ မဝင်ရာကနေ သံသယဖြစ်ပြီး လိုက်မေးရာကနေ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ သန်းငါးဆယ် ရှိတဲ့ ပင်နီဆူလာလောကရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး လိမ်လည်မှု ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဆင့်ခံလက်လွှဲသမားတွေဖြစ်တဲ့ သီရိမွန် (သန်းနှစ်ဆယ်)၊ လွယ်ဟိန်း (၁၃သန်း) နဲ့ တခြားတခြားသော ဆိုင်တွေကနေ စုစုပေါင်း သန်းလေးဆယ်။ ဦးပိုင်လီမိတက်ကလဲ သဒ္ဓါတတ်အား နည်းများမဆို ဆယ်သန်းတိတိ ပါဝင် လှူဒါန်းပါကြောင်းနဲ့ မတင်တင်မြင့်ရဲ့ မောင် ဦးပြုံး (ရန်ကုန်မှာနေသူ) ကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက ထိန်းသိမ်းထားပါကြောင်း ကြားသိရသမျှ သတင်းအဝဝကိုလက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။
ဟွန်ဒီ လွှဲငွေ US$ သန်း ၅၀ ခိုးယူထွက်ပြေးသူ မတင်တင်မြင့် ၏ "ရွှေရတနာ" ဆိုင် လိပ်စာ says:
December 22, 2011 at 9:03 PM Reply
စင်္ကာပူက ဟွန်ဒီ လွှဲငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ဖိုးကို ခိုးယူထွက်ပြေးသူ မတင်တင်မြင့် ၏ "ရွှေရတနာ" ဆိုင်၏ ဟွန်ဒီ ငွေလိမ်မှုကို မသိသေးသော ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲသူများ၏ ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲမှုကို "ရွှေရတနာ" ဆိုင် ရဲ့ ပိုင်ရှင် ကိုစိန်ဝင်းက ဆက်လက် လက်ခံနေပါသည်...
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ဖိုးကို ခိုးယူထွက်ပြေးသူ မတင်တင်မြင့် ၏ "ရွှေရတနာ" ဆိုင် လိပ်စာမှာ --
SHWE YADANAR TRADING PTE LTD
#03-52, Peninsula Plaza
Tel : 6337 0891
စင်ကာပူ အာဏာပိုင်များမှ မြန်မာများ၏ ဘူမိနက်သန် နေရာ ဖြစ်သည့် ပင်နီစူလာပလာဇာ ရှိ ဆိုင်များကို စစ်ဆေးဖွယ်ရှိ (၁) says:
December 28, 2011 at 2:23 AM Reply
စင်ကာပူနိုင်ငံ ပင်နီစူလာပလာဇာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ရောင်းချသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးမှ လွှဲငွေများကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး တိမ်းရှောင်သွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ငွေကြေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီချမှတ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးခိုင်မာမှုတို့အတွက် စိစစ် ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Monetary Authority of Singapore (MAS) မှလည်း ပင်နီစူလာပလာဇာ အခြေစိုက် စီပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ ၀င်ရောက်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်သွားဖွယ်ရှိနေကြောင်းလည်း စင်္ကာပူအခြေစိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များအကြားတွင် သတင်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။
ပင်နီစူလာပလာဇာအတွင်းရှိ ဟွန်ဒီလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအကြားမှ ထွက်ပေါ်လာသောသတင်းအရ အဆိုပါဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးမှာ ခန့်မှန်းငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းခန့်ကို အလွဲသုံးစားပြု လုပ်သွားခြင်းဖြစ် ကြောင်းနှင့် ပင်နီစူလာရှိ အခြားလွှဲငွေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီအချို့မှ တစ်ဆင့်ခံ လွှဲအပ်ငွေများလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Shwe Yadanar shop is still open.
Some Myanmar in Singapore do not know this case yet.
Please forward this news to Myanmar in Singapore.
မြန်မာများ ညီညွတ်စွာ ၀ိသမလောဘသမားများကို ခုခံရန် (၁) says:
December 28, 2011 at 3:35 AM Reply
ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁
စင်ကာပူမှာ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ်လောက် မိန်းမတစ်ဥိးက ယုံကြည်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ငွေလွှဲသူများရဲ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းလောက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အနေနဲ့ လက်ခံရယူပြီး ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူကြီးတဦးရဲ့ငွေတွေလဲပါသွားတော့ မြန်မာသတင်းစာထဲမှာလဲ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ လန်ဒန်ကိုထွက်ပြေးတယ်။ ဟိုမှ ဖမ်းမိတယ်ပြောတယ်။ လူမိပြီးငွေတွေပျောက်အောင် လူလိမ်တွေ အသာလေးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာလည်း ဆိုင်ခန်းနဲ့၊ ပြီးတော့ စင်ကာပူမှာ ကွန်ဒိုတွေလဲ ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုပဲ။ လူတွေအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီး စနစ်တကျ အချီကြီး ငွေလာလွှဲသူတွေများတဲ့အချိန် ထွက်ပြေးမယ် ကြံထားပြီးသားပါ။ ငွေအများဆုံး လာလွှဲချိန်ကတော့ စင်ကာပူမှာ အလုပ်သမားတွေ ငွေရွှင်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလကုန်၊ ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်အတွက် ဆယ်သုံးလစာ၊ ဘောနပ်စ်တွေ ရချိန်ကို စောင့်ပြီး၊ ကွန်ဒိုတွေရောင်းပြီး မိချောင်းအပြုံးနဲ့ ပါစပ်ဟပြီးစောင့်နေတဲ့ မိန်းမပါ။
ဟိုးယခင်ကလည်း ရွှေမန္တလေးဆိုပြီး ဆိုင်ဖွင့်၊ စင်ကာပူမှာ ရဲအမှုတွေဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည် ထွက်ပြေးရတဲ့အထိ ပြသနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ၀ိသမလောဘသားများကို စည်းရုံးပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ စင်ကာပူမှာ ဆိုင်ကြိးဖွင့်၊ ကွန်ဒိုဝယ် လုပ်ပြတော့ လူတွေက ယုံကြည်လာကြပြန်တယ်။ လူတွေကိုက ခက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံနဲနဲပိုပေးတော့ သူ့ဆီကို ငွေလွှဲကြသူတွေများတယ်။
မြန်မာများ ညီညွတ်စွာ ၀ိသမလောဘသမားများကို ခုခံရန် (၂) says:
December 28, 2011 at 3:36 AM Reply
ဆိုင်နာမည်က ရွေရတနာ ဆိုပဲ။ ပင်နီစူလာပလာစာမှာ အတည်တကျဖွင့်ထားပြီး သူ့ကိုအားကိုးမိတဲ့ လင်းလဲ့၊ လွိုင်ဟိန်း၊ သီရိမွန် စတဲ့ဆိုင်များလည်း ငွေလာလွှဲသူများကို ဒီမိန်းမဆီ တဆင့်ပေးတော့ အခု လူယုံသတ်ခံရပြီး အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်။ တခြားဆိုင်တွေအများကြိးလည်း ဒီမိန်းမကို တဆင့်လွှဲအပ်မိလို့ ဒုက္ခရောက်ရတယ်။
ဒီမိန်းမပိုင်တဲ့ ကွန်ဒိုတွေ၊ ဆိုင်ခန်းတွေ သိမ်းမလားဆိုရင်လည်း .. အားလုံးပြန်ရောင်းပြီးသွားပြီဆိုပဲ။ ကွန်ဒိုတလုံးဆို ငွေတသိန်းလက်ငင်းပေးလိုက်ရင် အရစ်ကျနဲ့ ၀ယ်လို့ရတာပဲ။ မြန်မာပြည်လို ဒေါ်လာ၇သိန်းတန်တဲ့ အိမ်ကို လက်ငင်းပေးစရာမှမလိုတာ။ ဒီလိုပဲ အထင်ကြီးအောင် အိမ်၊ ကားကြီးတွေ ၀ယ်စီးပြီး ဘီးစနက် လုပ်ကြတာ လုပ်ရုံးထုံးစံပါပဲ။
မန္တလေးနယ်က မိန်းမဆိုတော့ နယ်ခံတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတချို့တွေ၊ မန္တလေး၊ အထက်မြန်မာပြည်သားတွေ တော်တော်များများက ဒေသစွဲနဲ့ ဒီမိန်းမကို ယုံကြည်ကြတယ်။ အရင်က ပြသနာဖြစ်ဖူးတာ သိရက်နဲ့ နောက်တ ရလောက်ပါပြီဆိုပြီး အပြောကောင်းတဲ့ ဒိမိန်းမကို ယုံကြည်ကြတယ်။
တချို့များဆို တနှစ်လုံး စုထားတဲ့ ငွေတွေ ပါသွားတယ်။ သူဌေး သင်္ဘောမှောက်တာ အရေးမကြီးဘူး၊ သူတောင်းစားခွက်ပျောက်တာ ပိုခံရတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း တလ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ရတာကို ခြစ်ချုတ်စုပြီး မိဘဆီကိုပို့ပေးတဲ့ အိမ်ဖေါ်မိန်းကလေးတဦးရဲ့ မျက်ရည်ကို ဘယ်လိုသုတ်ပေးနိုင်မလဲ…။
မြန်မာများ ညီညွတ်စွာ ၀ိသမလောဘသမားများကို ခုခံရန် (၃) says:
အဲ .. ရွှေရတနာ ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကတော့ ဖွင့်နေတုန်းပါပဲ။ လူတွေ လာရှာတော့ အဲဒီမိန်းမရဲ့ယောက်ျား အသက်ကြီးကြီးလူကြီးက သူနဲ့မဆိုင်ကြောင်း၊ သူက ပါတနာလည်းမဟုတ်.. သူ့ဆိုင်မှာ နေရာငှားရမ်းပြီး ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်တယ်ဆိုပြီး သူကတောာင် ဒေါသထွက်တယ် ရှိသေးတယ်။ ဒီမိန်းမနဲ့ သူနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ အရင်က လင်မယားဖြစ်ပေမဲ့ အခု ကွာရှင်းထားပြီးသား .. ဆိုပြီး.. ကွာရှင်းစာချုပ်ကြီးကိုပါ ထုတ်ပြလိုက်သေးတယ်။ ခပ်တည်တည်ပဲ။
ငွေလွှဲသူများစွာလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး။ ရဲကို တိုင်တဲ့လူလည်း တိုင်ကြတာပေါ့။ စင်ကာပူရဲကလည်း ပြောတယ်။ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း ဟွန်ဒီလုပ်ခြင်းဟာ စင်ကာပူဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်လို့ လုပ်သူကို ဖမ်းဆီးနိုင်ပါတယ်။ လုပ်သူက စင်ကာပူမှာ မရှိတော့ တိုင်ချက်ဖွင့်လိုရင် သက်သေနဲ့ဖွင့်ပါ။ ငွေလွှဲခြင်းကို တရားဝင် ရီမစ်တင့်ဆားဗစ် Remittance Service ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဥပဒေအရဆို ငွေလွှဲသူရော၊ ငွေလွှဲလက်ခံလုပ်ပေးသူရော တရားမ၀င်ပါဘူး .. စသဖြင့်ပြောဆိုတော့ တိုင်ချက်ဖွင့်တယ် လို့လည်း မကြားသေးပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တိုင်ချက်ဖွင့်ထားပုံရပါတယ်။
မြန်မာများ ညီညွတ်စွာ ၀ိသမလောဘသမားများကို ခုခံရန် (၄) says:
ခံလိုက်ရသူများထဲက လူသိရှင် ကြားခံရဲသူတစ်ဦးက ဦးဆောင်ပြီး၊ ခံလိုက်ရသူများ အားလုံးကို စာရင်းကောက်၊ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကို စုစည်းပြီး စာရင်းလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ တရားဥပဒေအရ ဘယ်လိုပြန်လည်ရယူရမလဲဆိုတာ နားလည်တဲ့ အစိုးရရှေ့နေ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတခုခုနဲ့ ဆက်သွယ်ရပါမယ်။
စင်ကာပူမှာ ဒါမျိုး ဒေါ်လာ ၄ သန်းလောက် လိမ်လည်မှုကတော့ မကြာခဏ ပေါ်နေတာပါပဲ။ မြန်မာများမှာတော့ သံရုံးအခွန်ဆောင်မဲ့ငွေ တသိန်းကျော်ကို ကာစီနိုကစားပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ကိုစံဦး (၂၆ နှစ်) အမှုတခု ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ ထောင်ဂဏန်းလောက်ပဲ ဆုံးတော့ သိပ်အထိမနာလှပါဘူး။
အခုကိစ္စကတော့ တစ်ယေက်ကို ဒေါ်လာ ၄၊ ၅ ရာကနေ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်းဂဏန်းထိ ခံလိုက်ရသူများစွာ ရှိပါတယ်။
မြန်မာများ ညီညွတ်စွာ ၀ိသမလောဘသမားများကို ခုခံရန် (၅) says:
December 28, 2011 at 3:38 AM Reply
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၀ိသမလောဘသမားများဟာ (တောမီးလောင်၊ တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်) ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပက သာမန်လက်လုပ်လက်စားအလုပ်သမားတွေရဲ့ စုဆောင်းငွေတွေကို အမဲဖမ်းကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
တချို့ဆို ၁၀ နှစ် လောက် စင်ကာပူမှာ ရှာဖွေထားတဲ့ ချွေးနှီးစာ ဒေါ်လာ သိန်းဂဏန်းကို ပိုက်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်၊ စီးပွားရေး လုပ်တယ်။ မြန်မာပြည်က ၀ိသမလောဘသမားများနဲ့ ၀ိသမမိတ်ဆွေများက ဒီဒေါ်လာသိန်းဂဏန်းကို နည်းတောင်နည်းသေးဆိုပြီး ငွေတွေကို ခုတ်ထစ် စားသောက်ပစ်ကြပါတယ်။
ဒီတော့ အဲဒီမြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့လူ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဘီးစနက်သွားလုပ်သူ ရွှေဗမာရဲ့ အမှားပါပဲ။
မြန်မာများ ညီညွတ်စွာ ၀ိသမလောဘသမားများကို ခုခံရန် (၆) says:
ဗမာပြည်ဟာ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအတွက် ဘီးစနက်လုပ်သင့်တဲ့ အခြေအနေ မရှိသေးပါဘူး။ပြည်ပမှာ လုပ်ကိုင်ရရှိတဲ့ငွေကို ပြည်ပမှာပဲ သိမ်းထား၊ ရင်းနှီးထားပြီး မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲမှုကို စောင့်ကြည့်၊ အလည်သွား၊ အပမ်းဖြေ၊ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီ လှူဒါန်းဖို့ပဲ သင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါ။မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့၊ မိမိမိဆွေရင်းများ အဲဒီလိုမခံရဖို့ ယုံကြည်ရတဲ့ လမ်းပြကြယ်လို အသိုင်းအ၀ိုင်းတခု မကြာခင်ပေါ်လာမယ် လို့ မျှော်လင့်မ်ိပါတယ်။ Independent Consumer Watch လုပ်ပေးသူတွေ၊ အဖွဲ့တွေ ပေါ်လာမယ်။ မြန်မာမီဒီယာတွေကလည်း အာမခံပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
(မိုးမခ မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။)
စင်ကာပူမြန်မာလုပ်ငန်းရှင် လင်မယား ငွေများအလွဲသုံး၍ ထွက်ပြေးပြန် says:
December 28, 2011 at 4:12 AM Reply
စင်ကာပူ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်လင်မယား ငွေများ အလွဲသုံး၍ ထွက်ပြေးပြန်
စင်္ကာပူ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁
ရွှေရတနာ မြန်မာငွေလွှဲဆိုင်က မြန်မာမိသားစုများထံက ငွေများ လိမ်လည်ခိုးယူထွက်ပြေးသည့် အရေးအခင်း၏ အဆက်အဖြစ် လွိုင်ဟိန်း မြန်မာငွေလွှဲဆိုင်က ဆိုင်ရှင်လင်မယား ၂ ဦးကလည်း မြန်မာတို့လွှဲထားသော ငွေများကို မလွှဲပေးပဲ တိန်းရှောင်နေသည့် သတင်းထွက်ပေါ်လာသည်။ အဆိုပါ မြန်မာ ၂ဦး၏ ဓာတ်ပုံကို မြန်မာများကျက်စားရာ ပင်နီဆူလာပလာဇာ တွင် ချိတ်ဆွဲထားသည်။
ရွှေရတနာဆိုင် ပြိုလဲပြီးနောက် အခြားမြန်မာဆိုင်များတွင်လည်း လွှဲငွေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြပ်အတည်းများ၊ ကောလဟာလများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ အရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာဆိုင်ရှင်များက စုဝေးပြီးဖြစ်စေ၊ မြန်မာသံရုံးကဖြစ်စေ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း တရားဝင် မရှိသေးဟု ဆိုသည်။
စင်ကာပူမှ ငွေလိမ်သူ ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲ ၄ ဦး (၁) says:
December 28, 2011 at 4:38 AM Reply
အောက်ပါ (၄) ဦးသည် ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၂၀-၁၂-၂၀၁၁ နေ.မှစပြီး ၀ယ်/ရောင်း ထားသူများအား စင်ကာပူနိုင်ငံဘက်တွင် နိုင်ငံခြားငွေ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်တွင် မြန်မာကျပ်ငွေ တို.ကို ပေးချေမှု လုံးဝ မပြုလုပ်ဘဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) ဘီလျံ နှင့်အထက် ငွေကြေး လိမ်လည်ခဲ့ကြသည်။
ဆိုင်အမည် - ရွှေရတနာ ( Shwe Yadanar Mini Mart )
ဆိုင်လိပ်စာ - 111 North Bridge Road #03-51/52 Peninsula Plaza Singapore 179098
ငွေလိမ်သူ - တင်တင်မြင့် ( Tin Tin Myint ) @ SIM LIN LING
NRIC: S2715906J (SINGAPORE CITIZEN)
လက်ရှိနေရပ် - စင်ကာပူ (UK သို့ အလည်သွားနေသည်။)
စင်ကာပူမှ ငွေလိမ်သူ ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲ ၄ ဦး (၂) says:
December 28, 2011 at 4:39 AM Reply
ဆိုင်အမည် - သီရိမွန် ( Thi Yi Mon )
ဆိုင်လိပ်စာ - 111 North Bridge Road #03-59 Peninsula Plaza Singapore 179098
ငွေလိမ်သူ - နန်းခင်ခင်ထား ( Nang Khin Khin Htar )
NRIC: S2638170C (SINGAPORE P.R.)
လက်ရှိနေရပ် - စင်ကာပူ
စင်ကာပူမှ ငွေလိမ်သူ ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲ ၄ ဦး (၃) says:
ဆိုင်အမည် - စူပါ ရွိုင်ရယ်လ် ( Super Royal Mart Pte Ltd )
ဆိုင်လိပ်စာ - 111 North Bridge Road #04-50 Peninsula Plaza Singapore 179098
ငွေလိမ်သူ - မိုးမိုးတင် ( Moe Moe Tin )
NRIC: S6862087B (SINGAPORE CITIZEN)
စင်ကာပူမှ ငွေလိမ်သူ ဟွန်ဒီ ငွေလွှဲ ၄ ဦး (၄) says:
December 28, 2011 at 4:40 AM Reply
ဆိုင်အမည် - လွယ်ဟိန်း ( Loi Heing Trading (Singapore) Pte Ltd )
ဆိုင်လိပ်စာ - 111 North Bridge Road #04-66 Peninsula Plaza Singapore 179098
ငွေလိမ်သူ - ပြည့်ဖြိုး ( Pyae Phyoe )
FIN: G6079885R (FIN: Foreign Identification Number)
လက်ရှိနေရပ် - စင်ကာပူ (လက်ရှိ စင်ကာပူတွင် မရှိပါ။)
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၁) says:
December 28, 2011 at 7:27 AM Reply
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၂) says:
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၃) says:
December 28, 2011 at 7:29 AM Reply
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၄) says:
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၅) says:
December 28, 2011 at 7:30 AM Reply
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၆) says:
December 28, 2011 at 7:31 AM Reply
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၇) says:
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံမှပေးသော ၁၃ ရာနှုန်း မပြောနှင့် ၃ ရာနှုန်းပင် စင်ကာပူဘဏ်များက မပေးပါ။ ထိုအခါ စင်ကာပူဒေါ်လာ သောင်းဂဏန်း စုဆောင်းမိသူများသည် မိမိတို့ငွေများကို ယုံကြည်စိတ်ချသူ ပင်နီစူလာဆိုင်ပိုင်ရှင်များ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းရှင်များထံ အပ်နှံထားရသည်။
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၈) says:
ယုံကြည်၍ အတိုးနှုန်းများများရရန် အပ်နှံထားသောငွေများကို ထိုမိန်မက အပိုင်သိမ်းပိုက်သွားဖြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းမ ငွေကြေးအကြပ်အတည်းဆိုက်ရောက်နေသည်ကို လုပ်ငန်းရှင်များ ရိပ်မိသော်လည်း ထိုသို့လုပ်ရက်မည် လုံးဝ မထင်မှတ်ခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ပိုလျှံငွေ၊ စုဆောင်းငွေများကို အတိုးနှုန်း ပိုမို တိုးပွား ရလိုသူ များစွာ၏ ငွေများ၊ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ကျော်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ (YANGON, ELEVENDIA MEDIA သတင်းအရ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းခန့် ဟု ဆိုသည်)။
ရွှေရတနာဆိုင်က စတဲ့ ငွေလွှဲဈေးကွက် ပြိုကွဲမှု (၉) says:
December 28, 2011 at 7:33 AM Reply
မြန်မာပြည်တွင်လည်း ငွေတိုးပေးလုပ်ငန်း လုပ်သူများကို ဖမ်းဆီးပြီး .. စင်ကာပူတွင်မူ ထိုလုပ်ငန်းမှာ တရားမ၀င်ဖြစ်သောကြောင့် ရဲက ဖမ်းဆီးလောက်သည့် အဆင့်
မရောက်သေးပါ။ ပြဿနာက ခံလိုက်ရသူများကို အလွန် ပူလောင် စိတ်သောကရောက်စေပါသည်။
သို့သော် ခပ်တည်တည် ဖွင့်နေသော ရွှေရတနာဆိုင်ကိုပင် လူအများ အံ့သြနေဆဲဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းတာက အစိုးရရဲ့ လက်ရင်းလူတွေဖွင့်တဲ့ ဘဏ်တွေ စင်ကာပူဘဏ်ခွဲ လာဖွင့်ခါနီးမှ ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်။ နောက်မှာ အများကြီး ရှိသေးတယ်။
စင်ကာပူ ရွှေရတနာဆိုင် ၏ ဟွန်ဒီငွေလိမ်မှုက ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ရိုက်ခတ်လာနိုင် (၁) says:
January 2, 2012 at 7:34 AM Reply
စင်ကာပူ ရွှေရတနာဆိုင် ၏ ဟွန်ဒီငွေလိမ်မှုက ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ရိုက်ခတ်လာနိုင် (၃) says:
January 2, 2012 at 7:36 AM Reply
စင်ကာပူ ရွှေရတနာဆိုင် ၏ ဟွန်ဒီငွေလိမ်မှုက ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ရိုက်ခတ်လာနိုင် (၄) says:
စင်ကာပူ ရွှေရတနာဆိုင် ၏ ဟွန်ဒီငွေလိမ်မှုက ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ရိုက်ခတ်လာနိုင် (၅) says:
၁ ဒေါ်လာ = ကျပ် ၈၀၀ အထက် says:
January 6, 2012 at 5:22 PM Reply
ဒေါ်လာ ငွေလဲလှယ် နှုန်းထား ဒီဇင်ဘာလလယ်မှ စတင်ကာ ကျပ်ရှစ်ရာ အထက်သို့ ရောက်ရှိလာ
၂၀၁၂ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်
အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ကျပ် ၈၀၀ အောက် ကျဆင်းနေတဲ့ သိမ်ဖြူ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ရေး ကောင်တာမှ ဒေါ်လာငွေဈေး လဲလှယ် နှုန်းထားတွေဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် နောက်ပိုင်းက စတင်ပြီး ကျပ် ၈၀၀ အထက်ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိကာ ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်လျက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းက စတင်ကာ ဒေါ်လာငွေ လဲလှယ် နှုန်းထားဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ အက်ဖ်အီးစီ တစ်ယူနစ်ကို ငွေကျပ် ၇၈၀ မှ ၇၉၀ ၀န်းကျင်မှာ တည်ငြိမ် နေခဲ့ပေမယ့် အခု ဒီဇင်ဘာ လ ၂၀ ရက်နေ့က စတင်ကာ တစ်ဒေါ်လာကို ၈၀၅ ကျပ် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ရဲ့ ပိတ်ဈေးမှာတော့ တစ်ဒေါ် လာကို ၈၁၂ ကျပ်နဲ့ ဈေးပိတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ ပေါက်ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ဒေါ်လာ ကို ကျပ်ငွေ ၈၁၅ ကျပ်ထိ ထပ်မံ တက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်တက် ရတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက စင်္ကာပူမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ငွေလဲလှယ်မှု အများဆုံး ပြုလုပ်သူရဲ့ လိမ်လည် ထွက်ပြေးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဂယက်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြည်ပ ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်တွေက သုံးသပ် ထား ကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဒီလို ငွေလဲလှယ်နှုန်း အနည်းငယ် မြင့်တက် လာမှုကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အနည်းငယ် ဈေးနှုန်း မြင့် တက်မှုတွေ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဈေးနှုန်း အနည်းငယ် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု အပိုင်းတွေမှာ အနည်းငယ်လျော့ပါးမှု ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ထိရောက်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ မရှိဘူးလို့ လုပ်ငန်းရှင် တွေထံက သိရပါတယ်။
ဟွန်ဒီ ငွေလိမ်သူ ဒေါ်တင်တင်မြင့် တိမ်းရှောင်နေသော ဘာမင်ဂမ်သို့ လိုက်သွားသူ ပြောပြချက် says:
January 6, 2012 at 5:58 PM Reply
ဟွန်ဒီ ငွေလိမ်သူ ဒေါ်တင်တင်မြင့် တိမ်းရှောင်နေသော ဘာမင်ဂမ်သို့ လိုက်သွားသူ ပြောပြချက်
''အခု လိမ်လည်သွားတဲ့ ဒေါ်တင်တင်မြင့်ရဲ့ သမီး Stephine က လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Queen Mary University မှာ တက်ရောက်နေတာပါ။ သူ့ယောကျာ်းကတော့ စင်ကာပူမှာ ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ ရွှေရတနာဆိုင်မှာ ဟန်မပျက် ဆက်နေနေတယ်။ သူ့မိန်းမစီးပွားရေးကို မသိပါဘူးလို့လဲ ငြင်းထားတယ်။ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၂ နာရီနောက်ပိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့ ညနေ ၄ နာရီအချိန်လောက်မှာ သူကရုံးခန်းကိုဆင်းလာပြီး သူနဲ့လည်း လုံးဝအဆက်အသွယ်မရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ၂၁ ရက်နေ့မှာလည်း အများဆုံး ပါသွားတဲ့သူက ငိုယိုပြီးပြောလို့ သူ့ညီမ(ဒေါ်တင်တင်မြင့် ညီမ)က ဖုန်းအဆက်သွယ်ရပါတယ်။ သူ့ဆီ သူ့အစ်မပြန်ဆက်ရင် ဆက်ဆက်ပြော ပေးပါမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ၂၂ ရက်နေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါ လူပျောက်ကြော်ငြာဖို့ စလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ M.A.S (Monetary Authority of Singapore)က ပင်နီစူလာမှာ စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ကိုပြည့်ဖြိုး(Loi Heing) ကလည်း လုံးဝပျောက်သွားတယ်။ ကိုပြည့်ဖြိုးတို့လင်မယားက ဟောင်ကောင်ကိုသွားပြီး တရုတ်က ငွေပို့ပေးနေတဲ့ ကုန်သည်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီးပြီ ဗီဇာ လျောက်ထားပြီးပြီလို့ သိရတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ မန္တလေးကနာမည်ကြီး ရွှေဆိုင်တစ်ခုကလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်။ သူတို့က ဒေါ်တင်တင်မြင့်ဆီက ကျပ်ငွေတွေ အားလုံးယူထားလိုက်ပြီး ကိုပြည့်ဖြိုးနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့လို့ သိရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငွေတွေကျပ်သွားပြီး ချက်ချင်းအလုပ် ဆက်မလည်ပတ်နိုင်တော့ပဲ ငွေကြေးဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းသိရတာတွေ ပေါ် အခြေခံပြီးသူ (ဒေါ်တင်တင်မြင့်) ရှိမယ့် ဘာမင်ဂမ်ကို လိုက်သွား ခဲ့ပါတယ်''ဟု ဒေါ်တင်တင်မြင့် တိမ်းရှောင်နေသော ဘာမင်ဂမ်သို့ လိုက်သွားခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောပြပါသည်။
January 6, 2012 at 6:11 PM Reply
ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး (လိမ်လည်မှု) ဆန့် ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ ကို ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်အသိ ၊ ကိုယ့်အမျိုး၊ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်သူ တစ်ယောက်မှ မပါသွားဘူး ဆိုတဲ့ အသိမျိုးနဲ့ဘာသိဘာသာ နေမယ်ဆိုရင် ဒီလိုလူမျိုးတွေ အတင့်ရဲ လာပြီး စီးပွားဖြစ်ပုံစံမျိုးတွေတောင် ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ကာ ဘယ်လိုမှကို လက်သင့်ခံစရာမကောင်းအောင်ကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို နေရာအနှံ့ မှာပေါ်ပေါက်နေကြတာပါ။ ဒါဟာ ရှောင်တိမ်းနိုင်တတ်ရင် အေးဆေးပါဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ ပြန်နှံ့ နေပြီလို့ တောင် သုံးသပ်လို့ ရပါတယ်။
တစ်ချို့ သော သူတွေမှာတောင် အားကျတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေ ပြောဆိုသုံးနှုန်းနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ။
ဒီလောက် ငွေကြေး အတိုင်းအတာမျိုးဆို တန်တာပေါ့ကွာ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ အရှက် ၊ အကြောက် တရားဆိုတာ ဟာ ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိအောင်ကို ငွေကြေးလှိုင်းလုံး တွေက ဖုံးလွှမ်းနေပြီလား မသိတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီလို လိမ်လည်သွားတဲ့ သူတွေနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ သတင်းအချက်အလက် မှန်သမျှကို ကိုယ့်ဆိုင်ရာ ၀န်းကျင်နဲ့internet websites တွေပေါ်မှာ အများသူငှာ သိရှိဖို့ ရန် ဖြန့် ဝေကျဖို့ ပါဘဲ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံ၊
နေရာဒေသပေါင်းစုံ မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့
ရွှေမြန်မာများအနေနဲ့လဲ ဒီလိုလူတွေကို ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ နေရာ ဒေသတွေမှာ တွေ့ မိရင်လည်း ထပ်ဆင့်မျှဝေ ပေးခြင်းအားဖြင့် (ရဲကအရေးမလုပ်သည့်တိုင်)
တခြား လူတွေ ထပ်မံ အလိမ်မခံရဖို့ အရေး အကူအညီပေးရာရောက်ပါလိမ့်မယ် လို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ။
Eleven Media Group ၏ အမှားများ - (1) says:
Eleven Media Group (EMG) ကို အားပေး လေးစားခဲ့တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ယောက်ပါ။ တော်တော်များများကို ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်ပြီး ထောက်ပြရဲခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားခဲ့ပါတယ်။ EMG အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး ရေးပြပေးတာဟာ ပြည်သူ့တွေအတွက် အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ နောင်ကို ပြည်သူတွေ ဘယ်လို သတိထားသင့်တယ် ဆိုတာမျိုးကို မှတ်သားရပါတယ်။
EMG သတင်းထဲမှာ ပါနေတဲ့ မှားယွင်းမှုလေးတွေကိုတော့ နည်းနည်း ပြောချင်ပါတယ်။
လွိုင်ဟိန်း လင်မယားနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းမှာ "M.A.S က လာစစ်တဲ့ သတင်းကြောင့် ပျောက်သွားတယ်" ဆိုတာရယ်၊ "ဟောင်ကောင်ကိုသွားပြီး တရုတ်က ငွေပို့ပေးနေတဲ့ ကုန်သည်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီးပြီ၊ ဗီဇာ လျောက်ထားပြီးပြီ" ဆိုတာတွေရယ်ဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်။
ပြည့်ဖြိုး နဲ့ ကလျာတင့် ဆိုတဲ့ လွိုင်ဟိန်းက လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ၂၃ ရက်နေ့ကစပြီး ဆိုင်ပိတ်ပြီး ရှောင်တိမ်းနေခဲ့တာပါ။ M.A.S က ဘယ်နေ့ကမှ မစစ်ဆေးခဲ့သလို စစ်ဆေးမဲ့ သတင်းလည်း အတိအကျ ခိုင်ခိုင်မာမာကြီး မထွက်ခဲ့ပါဘူး။ လူတချုိ့ရဲ့ ထင်ကြေးကနေ ပြန့်သွားတဲ့ သတင်းလောက်ပါပဲ။ ဒီလို မခိုင်မာတဲ့ သတင်း မို့လို့သာ သူ့ဆိုင်ကလွဲပြီး တခြားဆိုင်အားလုံး သူ့တို့လိုမျိုး ရှောင်တိမ်း ထွက်ပြေးခြင်း မရှိခဲ့တာပေါ့။ မိန်းမ ဦးစီးတဲ့ ဆိုင်တောင်မှ သူ့လို မရှောင်တိမ်းပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒါကိုကြောက်လို့ ရှောင်တိမ်းတယ် ဆိုရင်လျှင် သူတို့ ငွေပေးစရာရှိတဲ့ လူတွေ ဆက်သွယ်တာကို စင်ကာပူမှာရော၊ ရန်ကုန်မှာရော၊ မန္တလေး မှာရော ထိုကိစ္စနှင့် ပက်သက်သော တာဝန်ရှိသူများကပါ ခိုင်ခိုင်မာမာ အကျိုးအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာ မပြောဆို မဖြေရှင်းဘဲ ဘာလို့ အစဖျောက် ရှောင်တိမ်းနေပါသနည်း။ MAS ကို ကြောက်လို့ဆိုရင် MAS နဲ့ ပက်သက်တာကိုပဲ ရှောင်ရမှာပေါ့။
Eleven Media Group ၏ အမှားများ - (2) says:
January 6, 2012 at 7:36 PM Reply
ရွှေရတနာဆိုင်က Monday ညနေကတည်းက သူ ပေးစရာရှိတာကို စတိပဲ ထည့်ပေးတဲ့အတွက် သူနဲ့ပက်သက်တဲ့ တစ်ဆင့်ခံဆိုင်တွေမှာ စိုးရိမ်ပြီး ပြသနာ စဖြစ်နေပါပြီ။ အရောင်းအ၀ယ်တွေ ခဏ ရပ်သွားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြည့်ဖြိုး ကတော့ Tuesday, Wednesday အထိ အဲ့ဒီသတင်းကို မသိသေးတဲ့လူတွေ၊ သိရက်နဲ့ သူ့ကိုယုံကြည်ပြီး ငွေလာလွှဲတဲ့လူတွေ ဆီက ငွေလက်ခံယူပြီး သူတို့ဖက်က ပြန်ပေးစရာရှိတာကိုတော့ မပေးတော့ဘူးလို့ သိရတယ်။
ရွှေရတနာ လိမ်သည့်အထဲတွင် လွိုင်ဟိန်း ပိုက်ဆံ ပါခဲ့လျှင်လည်း ငွေလည်ပတ်မှု ပမာဏ များသောကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု ပမာဏ အလွန်ကြီးမားခဲ့သော ဆိုင်ပင်လျှင် ရိုးရိုးသားသား ရင်ဆိုင်ပြီး မည်ရွေ့မည်မျှ ပါသွားသည်ကို အမှုပင် ဖွင့်ထားသေးသည် မဟုတ်ပါလား။ အခြားဆိုင်များ ကုန်သည်များကဲ့သို့ မည်ရွေ့မည်မျှကို အထောက်အထားများဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောပြရဲရမည် မဟုတ်ပါလား။ မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သော တာဝန် ဖြစ်သည့်အတွက် ဖြေရှင်းရမည် မဟုတ်ပါလော။ မခံနိုင်တဲ့ လူတွေ၊ ဆိုင်ရှင်တွေကတောင် သူ့ရုံးခန်းမှာ ဓာတ်ပုံကပ်၊ စာရေးလို့ ဒီသတင်းက တော်တော် ပြန့်နှံနေတာကို EMG တို့ သတိထားမိမှာပါ။ ဟောင်ကောင်ဗီဇာ ဆိုတာကလည်း ရွှေရတနာ ပြသနာ မဖြစ်ခင်ကတည်းက သွားရောက် လည်ပတ်ရန် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရပါတယ်။
တကယ် ငွေဆုံးရှုံးပြီး ခံလိုက်ရသော သူများအတွက် မျှတမှု ရှိအောင် EMG ရဲ့ သတင်းရရှိမှု မှားယွင်းနေမှုကို အမှန်တရားအတွက် အသိပေးသင့်သောကြောင့် ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ ခံလိုက်ရသော ကုန်သည်အသိုင်းအ၀ိုင်း ပြည်သူများကို တိတိကျကျ စုံစမ်းလျှင် သိနိုင်ပါတယ်။
Eleven Media Group ၏ အမှားများ - (3) says:
ဒီလို လူလ်ိမ်လင်မယားလို့ ဓာတ်ပုံကြီးနဲ့ နာမည်ကြီးနေတာကို ရှက်လာလို့ စိတ်ပြောင်းရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ သူများ ပူလောင်သလို ပြန်ပူလောင်ရတဲ့ ခံစားမှုကို အမြင်မှန် ပြန်ရခဲ့ရင် ဖြစ်ဖြစ် ငွေကြေး ဆုံးရှုံးတဲ့ လူတွေက သူတို့ ဆုံးရှုံးတဲ့ ငွေကြေးကိုပဲ ပြန်ရခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြမဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ၊ ကြေအေး ကျေနပ်ကြမှာချည်းပါပဲ။ ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကို ပြန်လည် သတင်း ဖြန့်ဝေကြမှာပါပဲ။ လူသတင်း လူချင်းဆောင်တာပါပဲ။ ကောင်းလျှင်ကောင်းသတင်း၊ မကောင်းလျှင်မကောင်းသတင်း ဖြန့်ဝေကြမှာပါပဲ။
အမြင်မှန် မြန်မြန် ပြန်ရလျှင် အစိုးရ ပြည်သူ အဖွဲအစည်း အပေါင်း အလုပ်ရှုတ်ရခြင်း၊ ပူပန်ရခြင်း မြန်မြန် ကင်းဝေးပါလိမ့်မည်။ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ရုတ်တရတ် သေဆုံးနိုင်ကြပါသည်။ သေလျှင် ထိုငွေအားလုံးကို မသယ်ဆောင်နိုင်ပါသော်လည်း မိမိပြုသော ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်များကတော့ ကိုယ်သယ်ချင်ချင်၊ မသယ်ချင်ချင် အရိပ်ပမာ ထက်ချပ်မကွာ လိုက်မည်ကို ဗုဒ္ဒဘာသာတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ခံပြီး အမြင်မှန် မြန်မြန်ရနိုင်ပါစေလို့။
စင်္ကာပူမှာ ရင်ပူတဲ့ ဘ၀များ says:
January 6, 2012 at 8:02 PM Reply
လှမဆုံး ... စလုံးဆိုတဲ့ စင်္ကာပူ
MRT မြန်ပါသည် သို့သော် ပျက်လို့
Stay ဆို နေခွင့်ကျဖို့ ခက်လှချေသေး။
မ, ပြေးပြန်ပေါ့ ငွေလွှဲရာ။
(Myanmar Referral blog)
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၊ ပင်နီစူလာပလာဇာ သို့ လွှဲငွေ ကျပ်သိန်း ၆၆၀၀ ကျော်ကို ကြည့်မြင်တိုင် ဟွန်ဒီ က လိမ် says:
January 10, 2012 at 10:03 AM Reply
ကြည်မြင်တိုင်ရှိ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲ/ပို့သည့် လုပ်ငန်းရုံး (ဟွန်ဒီ ရုံး) တစ်ခုမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၊ ပင်နီစူလာပလာဇာ သို့ ငွေလွှဲပို့သည့် ငွေကျပ်သိန်း ၆၆၀၀ ကျော် လိမ်လည်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ကိုရဲနိုင် (၃၅ နှစ်)၊ ဒေါပုံမြို့နယ်နေသူသည် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ဈေးကြီးရပ်ကွက်၊ ကွမ်းရွဲတန်းလမ်း အမှတ် ၈၂ ရှိ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲ/ပို့သည့် လုပ်ငန်းရုံး (ဟွန်ဒီ ရုံး) မှ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ငွေအကြိမ်ကြိမ် လွှဲ ပို့ခဲ့သည်။
ထို ဟွန်ဒီ ရုံး ဖွင့်လှစ်ပြီး ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ
ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး (၄၂ နှစ်)၊ (အမှတ် ၈၂၊ ကွမ်းရွဲတန်းလမ်း၊ ဈေးကြီးရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် နေသူ)
ဒေါ်စိုးစိုးသန်း (၄၀ နှစ်) (လိပ်စာတူ) နှင့်
ဦးပြုံး (၆၀ နှစ်) (ရွှေကမ္ဘာအိမ်ယာ၊ မင်းဓမ္မလမ်း (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် နေသူ)
တို့သုံးဦးက ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့သည်။
၁၅-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ်သိန်း ၁၇၂၀၊
၁၉-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ် ၁၉၈၆,၇၅,၀၀၀ ၊
၂၀-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ် ၂၉၃၀,၃၅,၀၀၀ ၊
စုစုပေါင်း ကျပ် ၆၆၃၇,၁၀,၀၀၀ ငွေလွှဲ ပို့ခဲ့သည်။
Golden Trade Link Co. Ltd;
အမှတ် ၁၁၁၊ North Bridge Road 0815 Peninsula Plaza
ထံသို့ ငွေလွှဲပို့ပေးရန် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး၊ ဒေါ်စိုးစိုးသန်း နှင့် ဦးပြုံး သုံးဦးထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့ သုံးဦးက ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့သော်လည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကိုအောင်မင်းထွန်းထံသို့ ငွေ ရောက်ရှိခြင်း မရှိသဖြင့် အဆိုပါသုံးဦးထံသို့ သွားရောက်စုံစမ်းရာ အတွေ့မခံဘဲ တိမ်းရှောင်နေသည်။
ကြည့်မြင်တိုင်ရဲစခန်းက (ပ)၄/၂၀၁၂၊ ပုဒ်မ-၄၂၀ ဖြင့် ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် အမှုဖွင့်ပြီး တရားခံ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး၊ ဒေါ်စိုးစိုးသန်း နှင့် ဦးပြုံးကို ဖမ်းဆီးရမိရန် စုံစမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။